कहिले फेरिन्छ, जातवादी गणतन्त्र ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
कहिले फेरिन्छ, जातवादी गणतन्त्र ?
बिहीबार प्रकाशित चन्द्रकिशोरको ‘जातवादी गणतन्त्र’ रोचक, घोचक र यथार्थपरक लाग्यो  । साँचो अर्थमा गणतन्त्र यतिबेला जातवादीमै केन्द्रित छन्  ।
पुरातन शासकवादी चरित्र र केही नयाँ शासक जसले उनीहरूकै बाटो पछ्याउन चाहेका छन्, ती दुबैथरी शासक मुलुकलाई जातवादीमै राखेर आफ्नो शासन चलाउन चाहन्छन् । जुन मुलुकका लागि विषमकारी छ । जसका विरुद्ध सदियौंदेखि उत्पीडनको जाँतोमा पिल्सिँदै आएका अधिकार विमुख दलित लगायतका वर्ग र जाति उठ्नैपर्ने देखिन्छ ।
कहिले धर्म त कहिले जातिको आधारमा विभाजित बन्दै आएको छ, हाम्रो समाज । अबको युगमा त्यो पाच्य छैन । तर आफूलाई जहिले पनि सामाजिक शासकको दर्जामा उभ्याउन सफल हुँदै आएका केहीले अहिले पनि धर्म र संस्कृतिको आडमा समाजमा अत्याचार गरिरहेकै छन् । उनीहरूले मुखले परिवर्तनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने पुरानै सामाजिक गन्ध देखिन्छ ।
जबदेखि श्रम र पेसाको आधारमा मान्छेको वर्गीकरण भयो, त्यसै बेलादेखि समाज कुरूप हुँदै आयो । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा, अल्पमत र बहुमतको आधारमा जुन संवैधानिक कानुनी सञ्जाल निर्माण भएको छ, यो त झनै विषमकारी छ, मानव समाज निर्माणका लागि । सरकारले वर्षेनि जति बजेट कला, धर्म र संस्कृतिको नाममा खर्चेको छ, त्यति बजेट विभेदरहित नयाँ मानवरूपी धर्म, संस्कृति र समाज निर्माणमा खर्चेको भए मुलुकमा देखिएका विषमकारी परिस्थितिलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर सत्ता र सरकारमा बसेका शासकहरू त्यो चाहँदैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्ताले गणतन्त्रलाई जातिवादीभित्र कैद गरेर अबको युग हाँक्न सकिँदैन ।
३० प्रतिशत कमिसन
‘सांसदकै योजनामा कमिसन’ समाचारले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा कसरी भ्रष्टाचारले गति लिइरहेको छ, स्पष्ट पारिदिएको छ  । जनप्रतिनिधिले त आफ्नो योजना फर्स्योट गर्न कमिसन नबुझाई धर पाउँदैनन् भने आमनागरिकको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ  ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सबैले महसुस गरेकै हो । सरकार निरीह बन्दै गएको छ । इतिहासकै बलियो सरकार भनिरहेको यो सरकार किन असफलतातर्फ अग्रसर बन्दै गइरहेको छ ? चिन्ताको विषय हो । सरकारले आफ्नो निर्माणसँगै समृद्धिलाई लक्ष्य बताउँदै आएको भए पनि त्यस अनुसारका काम हुनसकेका छैनन् । कमिसन र भ्रष्टाचारको चंगुलबाट कसरी समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अतः सरकारका सबै निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन जरुरी छ । अन्यथा यो सरकार पूर्णरूपमा असफल बन्नेछ । आम मानिसले यसको विकल्प खोज्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १०:४२